Guddoomiyihii hore ee degmada Maxaas oo Maxkamadda Ciidamada la soo taagay | Xaysimo
Home War Guddoomiyihii hore ee degmada Maxaas oo Maxkamadda Ciidamada la soo taagay
Guddoomiyihii hore ee degmada Maxaas oo Maxkamadda Ciidamada la soo taagay
Guddoomiyihii hore ee degmada Maxaas C/raxmaan Sheekh Cilmi Cawaale iyo nin kale oo lagu magacaabo Nuur Ibraahim Mahad-Alle ayaa maanta ka soo hor-muuqday Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida.
Labadan nin ayaa loo heystaa eedeymo la xriira inay ku lug lahaayeen qarax lagu dilay bilo ka hor Guddoomiye kuxigeenkii dhanka amniga degmada Maxaas C/rashiid Cusmaan Carab.
Guddoomiye kuxigeenkii hore ee Amniga degmada Maxaas ayaa 19-kii bishii April lagu dilay qarax, waxaana la geeriyooday Sarkaal boolis ah oo la saarnaa gaari xilliga qarax lala beegsanayay, waxaana mas’uuliyadda qaraxaas sheegatay Al-Shabaab.
Dilka Guddoomiye kuxigeenkii hore Amniga degmada Maxaas ayaa dhaliyay tuhun kala duwan, waxaana taas ay keentay in baaritaano hey’adaha amniga sameeyeen in loo qabto Guddoomiyaha degmada Maxaas iyo xubin kale oo lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin.
Dhageysiga dacwada ay qaadeyso Maxkamadda ayaa socon doonta, waxaana maanta Maxkamadda la horkeenay caddeymo kala duwan iyo warbixino la xiriira qaabka uu fal dambiyeedkaas u dhacay.